Iyo nyowani vhezheni ye systemd 249 yakatoburitswa uye uku ndiko kuchinja kwayo | Linux Vakapindwa muropa
Iyo nyowani vhezheni ye systemd 249 yakatoburitswa uye uku ndiko kuchinja kwayo
Iyo nyowani vhezheni ye systemd 249 ichangobva kuunzwa iyo inosvika inenge ichizadzisa yayo inofungidzirwa yekuvandudza kutenderera (approx yega yega mwedzi mina) uye mune iyo nhevedzano yekuvandudza, kugadzirisa bug uye kunyanya mabasa matsva akaunzwa.
Uye ndezvekuti mune iyi nyowani vhezheni yakaratidza iyo kugona kutsanangura vashandisi / mapoka muJSON fomati, iyo Journal protocol yakasimbiswa, inorerutsa kurongeka kwe disk partition kurodha izvo zvinotsiva mumwe neumwe, zvinowedzera kugona kusunga mapurogiramu eBPF kumasevhisi, inoshandisa mushandisi mepu mepu pazvikamu zvakamisikidzwa, inopa chikamu chakakura chekugadziriswa kwenetiweki, uye kugona kumhanyisa midziyo.
Kune avo vasingazive systemd, iwe unofanirwa kuziva kuti iyi seti yehurongwa hwekutonga madhimoni, maraibhurari uye maturusi akagadzirwa sepakati pehutongi uye yekumisikidza chikuva chekubatana nekernel yeGNU / Linux Inoshanda Sisitimu.
Main nyowani maficha e systemd 249
Pakati pekuchinja kwakanyanya kumira yeiyi vhezheni nyowani yakapihwa, tinogona kuwana chiie mu systemd-bvunza-password uye systemd-sysusers vakawedzera rutsigiro rwekukumbira seta mapassword uchishandisa iyo nyowani systemd 247 mashandiro ekuchengetedza zvakadzama dhata uchishandisa mafaira epakati mune yakasarudzika dhairekitori, sekutadza magwaro anogamuchirwa kubva mukuita nePID1, inovagamuchira, semuenzaniso, kubva kumaneja wemidziyo, iyo Inokutendera iwe kuronga zvigadziriso zvepassword zvemushandisi pane yekutanga bhuti.
MuSystemd-yekutangaboot rutsigiro inowedzerwa kuti ishandise yakachengeteka dhata yekufambisa Yakavanzika kukumbira akasiyana maseru paramende, ayo anogona kushandiswa kutanga iyo system gadziriso kana mudziyo wemidziyo usina iyo inodikanwa yekugadziriswa mu / etc dhairekitori yatanga kekutanga.
En userdb uye nss-systemd zvakapihwa mukana kune dzimwe tsananguro dzemushandisi iri mumadhairekitori / etc / userdb /, / run / userdb /, / run / host / userdb / uye / usr / lib / userdb /, izvo zvinotsanangurwa muJSON fomati. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti chiitiko ichi chinopa imwe yekuwedzera mashini ekugadzira vashandisi muhurongwa, ichipa kusangana kwakazara neNSS uye / etc / mumvuri.
Imwe shanduko inomira pachena ndeyekuti a mashini ayo anoita kuti runyoro rurerukirwe nekumisikidza zvikamu zve disk. Kana iyo diski mufananidzo iine zvikamu zviviri / o / usr uye udev haina kuona paramende 'midzi =' kana iri kugadzirisa diski mifananidzo yakatsanangurwa nesarudzo «–Image»Muzvishandiso systemd-nspawn uye systemd-disect, iyo boot partition inogona kuverengerwa nekuenzanisa maGPT ma tag (uchifungidzira iyo GPT tag inotaura nezvehuwandu hwehuwandu hwezvakakamurwa zvemukati uye systemd inosarudza iyo partition pamwe neazvino shanduko).
En systemd-spawn, sarudzo "-Private-mushandisi-chown" yakatsiviwa neimwe sarudzo yepasirese "- yakavanzika-mushandisi-chivakwa", chingave chii Chown zvakaenzana ne «-Private-mushandisi- chown«,» Bvisa »kudzima marongero apfuura, kumepu maID mushandisi pane akakwenenzverwa mafaera uye» auto «kusarudza» mepu «kana iyo kernel iine basa rinodiwa (5.12+), kana kudzoka kuti udzokere«chown"zvikasadaro.
Kune rimwe divi mukuita PID 1, panguva yebhoti, zita rechikwata uye tsananguro inovimbiswa kune zvinoratidzwa panguva imwe chete, pamwe nekubuda kwacho kunogona kuchinjwa kuburikidza neparamende «StatusUnitFormat = yakasanganiswa»Mune system.conf kana iyo kernel yekuraira mutsara sarudzo "Systemd.status-unit-fomati = yakabatanidzwa".
Yeimwe shanduko izvo zvinomira pachena:
Iyo itsva hardware hwaro hweMotoWire zvishandiso (IEEE 1394) yakawedzerwa kune udev.
Iyo BPFProgram yekugadziriswa yawedzerwa kune mafaera ebasa, ayo aunogona kuronga nawo kurodha pasi kweBPF zvirongwa mukati meiyo kernel uye nekuzvibata nazvo zvine zvinongedzo kune mamwe systemd masevhisi.
Nss-systemd inopa synthesis yevashandisi / boka zvinyorwa mukati / etc / mumvuri uchishandisa mapassword akasimba kubva systemd-homed.
Systemd-fstab-jenareta uye systemd-distribu ikozvino vaine kugona kubhuroka kubva kuma disks ayo anongova ne / usr partition uye isina midzi yemidzi (iyo midzi yekuparadzanisa ichagadzirwa neiyo systemd-distribu yekushandisa pane yekutanga bhuti).
Systemd-solved inowedzera iyo domain "home.arpa" kune iyo NTA (Negative Trust Anchors) rondedzero, iyo inokurudzirwa kumatunhu epamba, asi isingashandiswe muDNSSEC.
Iwo "%" anotsanangudza akaiswa mukati meCPUAffinity paramende.
Yakawedzera paramende ManageForeignRoutingPolicyRules ku .network mafaera, ayo anogona kushandiswa kusarudzira yechitatu-bato nzira dzekufambisa kubva mukugadziriswa ne systemd-networkd.
Yakawedzerwa InodiwaFamilyForOnline paramende ku ".network" mafaera kuti uone kuvepo kwe IPv4 kana IPv6 kero sechiratidzo chekuti network interface iri "online" Networkctl inopa "yepamhepo" mamiriro echiso kune yega link.
OutgoingInterface paramende yakawedzerwa ku ".network" mafaera kutsanangura mafambisirwo ari kubuda kana uchigadzirisa network mabhiriji.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo, iwe unogona kutarisa iyo ruzivo Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Iyo nyowani vhezheni ye systemd 249 yakatoburitswa uye uku ndiko kuchinja kwayo
Tor zvakare ajoina iyo Rust fever uye inotarisira kutsiva C mune ramangwana.
Mhosva nyowani inopokana neGoogle yeayo Android application chitoro